China Fitaovana fanamboarana OTR rim ho an'ny orinasa mpamokatra mpamokatra China China OEM Hywg
Inona no atao hoe sisin'ny fitaovana fananganana?
Faritra fampitaovana dia karazana iray Sisin'ny OTRary ampiasaina amin'ny milina fanamboarana toy ny backhoe loader, grader, wheel loader, artikulie hauler sns. Izahay no mpamatsy randran'ny OEM OTR ho an'ny anarana be toa ny Caterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere ary XCMG. Isaky ny isam-bolana an'arivony an'arivony maro an'isa HYWG OTR no miakatra amina kodiarana CAT, Volvo, Liebheer ary XCMG, mpandeha kilasy ary mpitaingina kodiarana.
Firy amin'ny karazana peratra fanamboarana firy?
Misy karazana isan-karazany fitaovana fananganana sisinys, nofaritan'ny rafitry ny fananganana ny firafitra matetika dia rim 3-PC na rim 5-PC, antsoina koa hoe rim na sombin-javatra dimy, dia vita amin'ny sombin-javatra isan-karazany toy ny sisin'ny rim, peratra fanidiana, flange, peratra sisiny ary seza vakana.
Voafaritry ny firafitra, fitaovana fananganana sisiny azo sokajiana ho eto ambany.
Rim 3-PC, antsoina koa hoe rim misy sombin-javatra, dia ataon'ny sombin-javatra telo izay ny sisin'ny rim, ny peratra fanidiana ary ny flange. Ny sisin'ny 3-PC dia mazàna 12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5 ary 17.00-25 / 1.7. Ny 3-PC dia lanjany antonony, enta-mavesatra ary haingam-pandeha, ampiasaina be dia be amin'ny fitaovana fananganana toy ny mpianatra kilasy, mpamaky kodiarana kely sy afovoany ary forklift. Afaka mitondra mihoatra ny sisin'ny 1-PC izy io saingy misy fetran'ny hafainganana.
5-PC rim, antsoina koa hoe rim-dimy, dia vita amin'ny faribolana dimy izay misy ny rim base, peratra fanidiana, seza vakana ary peratra roa. 5-PC rim dia matetika habe 36.00-25 / 1.5, 13.00-25 / 2.5, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0, 24.00-25 / 3.0, 25.00-25 / 3.5, 13.00-33 / 2.5, miakatra hatramin'ny 19.50-49 / 4.0. Ny sisin'ny 5-PC dia mavesatra, mavesatra ary haingam-pandeha, be mpampiasa amin'ny fanamboarana fitaovana sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany io, toy ny dozers, mpandeha kodiarana lehibe, mpitaingin-tsoavaly, kamio manary ary milina fitrandrahana hafa.
Ampiasaina inona ny sisin'ny fitaovana fananganana?
Ny habe malaza amin'ny sisin'ny fitaovana fananganana dia 12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5, 17.00-25 / 1.7, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0,24.00-25 / 3.0 ary 25.00-25 / 3.5. HYWG Sisin'ny OTR azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana fananganana toy ny:
(3) Loadan'ny kodiarana
(4) Hauler voatonona
Modely malaza atolotray
Haben'ny Rim Karazana faribolana Haben'ny kodiarana Modely milina Karazana milina
14.00-25 / 1.5 3-PC 17.5R25 CASE 521 Loader kodiarana kely
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CAT 938K Loader kodiarana kely
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CAT924H Loader kodiarana kely
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CAT930K Loader kodiarana kely
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CASE 721 Loader kodiarana kely
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Volvo L70 / 90 Loader kodiarana kely
17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Komatsu WA270 Loader kodiarana kely
19.50-25 / 2.5 5-PC 23.5R25 CAT 972 Loadan'ny mpamaky kodiarana
19.50-25 / 2.5 5-PC 23.5R25 CASE 821 Loadan'ny mpamaky kodiarana
19.50-25 / 2.5 5-PC 23.5R25 Volvo L110 / 120 Loadan'ny mpamaky kodiarana
22.00-25 / 3.0 5-PC 29.5R25 CAT 966 Loadan'ny mpamaky kodiarana
22.00-25 / 3.0 5-PC 29.5R25 CAT980 G / H / K / M Loadan'ny mpamaky kodiarana
25.00-25 / 3.5 5-PC 29.5R25 Komatsu HM 400-3 Loadan'ny mpamaky kodiarana
25.00-25 / 3.5 5-PC 29.5R25 Volvo A40 Artulerated Hauler
25.00-29 / 3.5 5-PC 29.5R29 CAT 982M Loader kodiarana lehibe
27.00-29 / 3.0 5-PC 33.5R29 Volvo A60H Artulerated Hauler
Ny tombotsoantsika amin'ny fampitaovana fampitaovana?
(1) HYWG no eny ivelan'ny arabe sisin'ny orinasa mpamokatra firavaka.
(2) Tsy vitan'ny rim feno no azonay atolotra fa koa ny singa rim toy ny peratra hidin-trano, peratra lafiny, flanges ary seza vakana.
(3) Manana vokatra feno isika, anisan'izany ny sisin-tanin'ny orinasa 1-PC, ny forklift rim, ny sisin'ny 3-PC ary ny sisin'ny 5-PC, afaka mamatsy ny karazana OTR rehetra izahay.
(4) Ny kalitaonay dia voaporofon'ny OEM lehibe toy ny Caterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere ary XCMG.
(5) Hafa noho ny mpanjifa OEM etsy ambony dia afaka manome masinina OTR malaza toa ny Komatsu, Hitachi, Doosan, Bell ary JCB ihany koa isika.
Ny vokatray nasehon'ny mpanjifa:
Ny vokatray farany OTR dia ny 36.00-25 / 1.5 natao ho an'ny Volvo A25 / 30 ho an'ny fampiharana malemy any Eropa.
Izahay dia mivory kodiarana sy rim ho an'ny mpamaky kodiarana Volvo OE.
Teo aloha: Ireo singa OTR Rim dia samy hafa habe amin'ny 8 ″ ka hatramin'ny 63 ″
Manaraka: Fitrandrahana harena ankibon'ny tany Sinoa OEM mpanamboatra haben'ny 33 ″ ka hatramin'ny 63 ″